UN gosipụtara 90 na-egosi: usoro nke ihu igwe mepụtara iji mejupụta ọchịchị ụwa: Martin Vrijland
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 18 November 2019	• 5 Comments
isi mmalite: alt-market.com
N'ime afọ '90 bipụtara odeakwụkwọ ukwu nke UN, Robert Muller, akọwapụtara na nke ọ rụrụ ụka na a ga-enwerịrị ọchịchị ụwa. Ekwesịrị inweta ọchịchị nchịkwa ụwa a site na echiche nke "ichebe ụwa" site na ịmara gburugburu ebe obibi dịka akụkụ kacha mkpa. Na nkọwapụta ya, a kọwara etu ọha mmadụ ga-esi kwenye ịnakwere ọchịchị ụwa site na ịgha mkpụrụ maka atụgbaghara gburugburu ebe obibi. Ekwesịrị igwu egwu ọhaneze na echiche ọha mmadụ na-emebi onwe ya.
N’otu akụkọ isiokwu ya bụ "Kwesịrị Ekwentị Ọchịchị: Mmeghe na Tozọ Ka Createmepụta," Robert Muller kwupụtara otú a ga-esi jiri echiche chepụtara mgbanwe mgbanwe ihu igwe iji mee ka ọnụ ọgụgụ "mkpa nke ọchịchị ụwa dị. Na mgbakwunye, ọ na-ekwu na atụmatụ ahụ banyere mwepụta nke 'okpukpe ụwa' na 'mbelata ọnụ ọgụgụ mmadụ'. Onye mgbasa ozi Brandon Smith gosipụtara ihe ndị a n'uju isiokwu a.
Ọ dị mkpa ịghọta usoro nke ika site n'aka ekpe yana aka nri na ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Nke ahụ bụ ihe na-aga Europe na US niile. Aka ekpe dị ka ọ na-anabata ihe ọ bụla metụtara ebumnuche UN akpọtụrụ aha na na ihe gara aga nnọkọ 'ziri ezi' ma ọ bụ 'nnwere onwe' na ndọrọ ndọrọ ọchịchị Dutch abụrụla nke a hapụrụ kpamkpam. Ọhụrụ Thierry Baudet na Geert Wilders jupụtara na ikike ọhụrụ a. No nụghị Baudet na mgbasa ozi, n'ihi na ikike ọhụrụ ahụ na-adọta ọtụtụ ntuli aka, nke mere na a ga-eji nwayọ belata ya (nke kpatara ọgba aghara na otu ahụ na-arụ ọrụ nke ọma mgbe niile). Na Thierry maara na ọ bụ nwa nkịta ike (nke ndị ezinaụlọ Clingendael Institute zụrụ azụ) na ya mere ọ nọrọ jụụ n'oge na-adịbeghị anya.
N'ọnọdụ ọ bụla, o doro anya na a tụpụtara apocalypse gburugburu ebe obibi n'ime afọ 90. Ọ bụ ederede doro anya. Nke ahụ pụtara na site na A ruo Z ka emejupụtara ya gbaa ndị mmadụ ume ma kwagharia. Ndị ọrụ ihe nkiri (a na-akpọkwa ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị) nke njikọ ọhụrụ: Mark Rutte & Co. Amụma ahụ na-agabiga ugbu a site na iwu mberede nke dabere na mgbakwunye mgbaghara gburugburu ebe obibi.
Anyị ka nwere okwukwe dị ukwuu na ezigbo nke ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Eziokwu ahụ bụ na ndị mmadụ dịka Martin Vrijland na-akpọ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ka ha bụrụ ndị na-eme ihe nkiri, na nke ahụ ga - eme ka echiche gị na iwe gị na ụmụ nwanyị ndị ahụ na ụmụ nwoke ndị ahụ na Hague mara gị, iwe na iwe gị. Ha bụ ndị na-eme ihe nkiri ahọpụtara, lekọta ma lekọta ezinụlọ eze site na mgbe ha dị obere, mejupụta ụtọ na isi nile dị na ọha mmadụ iji mejupụta ọgbaghara nke ọchịchị onye kwuo uche ya. Ndi oru mgbasa ozi bu ndi n’ezi ngwa ahia ha ma nye aka imeputa ma kwado echiche nzuzu nke mgbagha. Ọ bụrụ n’ịchọrọ inye ndị mmadụ echiche na ọ dị ihe a ga-emechu aka n’ime mmiri ara ehi, ị ga - enwe ike ijide echiche niile enwere ike na nnọkọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị wee mee ntuli aka, n’olileanya na amụma ga-adịrị ha mma. Ka ị ga - ebu ụzọ chigharị iri asatọ ma soro ụkwụ na - aga njem iji hụ na ọchịchị onye kwuo uche ya bụ ụgha? Liesgha ole ka edobeghị igosipụta ka ndị ụlọ ọrụ gọọmentị na-ezuru ohi na-ezuru ohi ma na-agbanye agend nke na-enye echiche nke ịdị mma maka mba ahụ, kama ọ bụ naanị iji chebe klọb elitist na ịta ahụhụ ma na-emegbu ndị mmadụ?
In akwụkwọ ọhụrụ m Akọwaara m etu hares si aga, m na - akọwakwa ihe kpatara okpukpe ụwa ọhụrụ a ga - eji abịa na otu esi gbasa akụkọ nduhie taa (na egwurugwu). Ya mere enwere ike doo anya na a na-achịkwa ihe a niile na ọkwa UN, yabụ enwere ike ịkọ nkọ ebe nlebara anya na-enweghị atụ maka Greta Thunberg na Mmebi Mmebi si na mberede. Ọzọ: emebere ya ma ọ dị na nkọwapụta nke UN n'ime afọ '90. Yabụ na ọ bụ atụmatụ ma ọ bụrụ na enwee ihe dị na ya, a na-etinye ego buru ibu na igwe na-agbasa echiche, a na-azụtakwa ọtụtụ mmadụ iji kwalite atụmatụ a n'akụkụ niile nke ọha mmadụ.
Ihe aghugho ugbu a bu inye ihe obula nke jikotara ebumnuche UN a, akara ‘ekpe’ na ihe nile nke ebum n’uche gosiputara iji nye akara a ‘aka’. Agbamkpa ahụ kachasị mma bụ iji jikọta akara ahụ na ikike nke ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị a ma ama (ndị na-eme ihe nkiri na ọrụ nke klas na-achịkwa) dịka Donald Trump, Boris Johnson, Nigel Farage, Thierry Baudet na ihe ndị yiri ya. Site na ịgha akụ na ụba na-etolite ma na-akpata ọgba aghara mmekọrịta, ị nwere ike imeri ihe ọ bụla jikọtara na ika ahụ 'ziri ezi'. Na nkenke, ị na-emeso ụdị echiche ọ bụla na ụdị nyocha niile na nyochachara nke ọma. Nke ahụ bụ ntọala nke steeti ndị uwe ojii na-edu ụwa na iwebata ndị uwe ojii na-eche echiche.
Ọ bụ ihe amamihe dị na ikesa akwụkwọ m, n'ihi na mmachi na social media adịlarịrị nke ukwuu na ozi a dị mkpa esiri ndị mmadụ ike. N’ezie, ndị uwe ojii ahụ echeelarị n’usoro, n’okpuru otu ụdị nchekwa ‘nchekwa’ (nchebe megide akụkọ adịgboroja ma ọ bụ echiche dị oke njọ). Still ka nwere ike inye gị akwụkwọ niile. Akwụkwọ ahụ nyere nkọwapụta nke aghụghọ na aghụghọ niile n'ụzọ doro anya ma gosipụtakwa etu usoro njikwa njikwa ụwa ọhụụ ga-esi ruo ọkwa DNA na site na ntanetị kọmputa. Akwụkwọ a abụghị akwụkwọ David Icke, o nweghi ihe gbasara ya ma ọ bụ ihe ala adịghị mma. Akwụkwọ a, agbanyeghị, na-enye nchịkọta dị mkpa gbasara otu esi ahazi usoro mmemme na etu a ga-esi ghọta ha. N'ihi na enwere ike ịgụ akwụkwọ ahụ n'otu ụbọchị ma nwee usoro a na-ahụ anya, ọ dị mfe ikesara ndị ezinụlọ na ndị enyi. Oge eruola ka anyị mee ihe ma ya abụrụkwa oge ịkwalite akwụkwọ a. Also kwadokwara ọrụ m na ịzụta akwụkwọ ahụ.
Ihe ndekọ njikọ njikọ: alt-market.com
Ikwesiri ịgụ nke a n'ụzọ dị jụụ na enwere ezigbo ihe mmụta na ndụ
Tags: alt ahia, Brandon, com, agba, njikọ, gosipụta, akara, n'etiti, Akwukwo UN gburugburu ebe obibi, rechts, Robert Muller, Rutte, Smith
18 November 2019 na 11: 28
Nnukwu edemede ọzọ .. N'ezie anyị niile bụ ndị na-eme ihe nkiri site na aha nna anyị.
Naanị zụta akwụkwọ gị ka nne m na ndị ezinụlọ m ndị ọzọ (ndị ka nọ na nchebara echiche) wee nwee olile anya si n'ọnọdụ enweghị ọmịiko ha; )
18 November 2019 na 12: 14
Na '60' o dooro anya ugbu a site na klọb Rome (Rockefeller, Kissinger, Strong wdg) na ha ga-eji ihu igwe gbue nnukwu. Nke ahụ gunyere injinịa Geo ...
David Rockefeller nọ ebe ahụ na Colorado na 1987 maka "ọgbakọ nke Anọ nke Anọ," nzukọ nke akụkọ ihe mere eme ụwa nke ọ fọrọ nke nta ka ọ nụtụbeghị banyere ya. N'ịdị amasị nke Rockefeller, Ike, James Baker na Edmund de Rothschild n'onwe ya, ogbako ahụ kwụsịrị na ajụjụ maka itinye ego maka mmekpa ahụ maka gburugburu mmekpa ahụ siri ike mebere site na ọrụ ya na Mmemme Gburugburu United Nations.
Ọ bụ na nnọkọ ahụ (ndekọ nke enwere na ntanetị site n'aka onye isi ọcha George Hunt) na Rothschild kpọrọ maka Bank Conservation World, nke ọ tụrụ anya dị ka usoro ego iji nweta "atụmatụ Marshall nke abụọ" nke a ga-eji maka ụwa nke atọ. efe efe ”na nkịta na-ahụ n'anya zuru ụwa ọnụ na-eti mkpu" mmepe na-adigide. "
Onye isi ala US George Bush na-ekwu maka nrọ 1Rothschild mezuru mgbe Onye isi ike na-achịkwa nzukọ ọgbakọ UN dị elu dị elu: Mgbakọ 1992 "Mgbakọ Ọchịchị." Mgbakọ ụwa nke mere ka Bank Conservation World bụrụ ihe dị adị.
28 November 2019 na 17: 01
28 November 2019 na 19: 37
ekpughere nkwenye dị mma na nke ahụ na 1992! Echiche 1.067 ebe 2012 na-ekwu, m ebudatara vidiyo ahụ. Daalụ!
Ben dere, sị:
18 November 2019 na 20: 09
"Ọ bụrụ na ịchọrọ ime ka ndị mmadụ mata na enwere ihe ọ ga-adaba na mmiri ara ehi, mgbe ahụ ị ga - enwerịrị ike ịnabata echiche niile enwere ike na nnọkọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị wee mee ntuli aka, n'olileanya na a ga - enwe ụkpụrụ ga - adịrị ha mma. "
" Ọnọdụ ndị uwe ojii nke na-adịghị njọ karịa Nazi Germany na-ekpughe dị ka wolf na uwe atụrụ ma ị hụghị ya
Nna nna Greta Thunberg ghọrọ onye na-echepụta ihe ọkụkụ na ibelata onu ogugu site na ihe omimi. »
Nleta nile: 14.666.489